သန်းကြွယ်သူဌေးအသေးအဖွဲ - မည်သူသည်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လိုသနည်း Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Millionaire အသေးအဖွဲ: အဘယ်သူ Millionaire လေို?
Millionaire အသေးအဖွဲ: အဘယ်သူ Millionaire လေို? APK ကို
အဘယ်သူသည်ယခုသင့်ဖုန်းပေါ်မှာတစ် Millionaire ?, Be ရန်လိုကွ! , သင့်အသိပညာစမ်းသပ်ရန်ပရိသတ်ကိုအပေါ်ကိုပဌနာ, & ကျွမ်းကျင်သူများကသင့်ရဲ့အဖွဲ့ဆော! ယနေ့အခမဲ့တစ်ဦး Millionaire ဖြစ်လာဖို့ငွေပင်ကိုတက် - ရယ်, အာရုံကြော, & လက်သည်း-ကိုက်တင်းမာမှု Join!
အဘယ်သူသည်တစ်ဦးက Millionaire ရဲ့ Awesome အင်္ဂါရပ်များဖြစ်ချင်သော:
+ မြို့တော်သစ် Unlock နှင့်ကမ္ဘာခရီးသွားလာရေး!
ထိုကဲ့သို့သော 50 အဖြစ် + အသုံးပြုမှု Classic Lifeline: 50 & ပရိသတ်ကိုမေး, & အားလုံးကိုအသစ်ကကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကိုမေးပါ!
+ သင်၌ကစားတိုင်း CITY အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ Build!
+ constant ဂိမ်း updates များကို!
+ ပေါ်တွင်-The-go ကျွန်တော်တို့ရဲ့ offline mode နဲ့အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုငျလိုခငျြအနိုင်ရ Play!
တစ်ဦး Millionaire ဖြစ်လာအတွက်စိတ်လှုပ်ရှား Join! ရောမမြို့ကနေဘရာဇီးမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြို့ကြီးတွေမှာမှတဆင့် BIG ဆုလာဘ်အနိုင်ရ! တစ်ဦးက Millionaire BE လိုကစား Start? အခမဲ့နှင့်သင့် Smart သက်သေပြဖို့!
သီးသန့် offline mode:
အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆို Play! သင့်ဦးနှောက်မာရ်နတ်နှင့် on-the-go စမ်းသပ်ဖို့သင့်အသိပညာထား!
စုဆောင်းနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်သူလေ့ကျင့်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် attribute တွေနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအသီးအသီး! သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူပေါ် မူတည်. သုံးပါနှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူပါ!
သငျသညျဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးမှကိုတက်အဖြစ်ကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာ၏ရမှတ်များဆန့်ကျင် Play! ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးပျော်စရာပဟေဠိပြပွဲနှင့်သင်၏အသိပညာချွတ်ပြရန်!
Download အဘယ်သူသည်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ချင်တယ်? ဒီနေ့
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုပဲ https://www.facebook.com/WhoWantstoBeAMillionaireMobile/
feature အသစ်: မှတ်တိုင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
သငျသညျမှားယှငျးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေလျှင်သင်သာသင်လှေကားအပေါ်ကို ရွေးချယ်. ရာထူးကျပါလိမ့်မယ်, သင့်အစက်အပြောက်အထိမ်းအမှတ်လက်ဝဲထိပ်ဆုံးထောင့်၌တွေ့အလံ powerup ကိုသုံးပါ!
NEW EVENT သည်: လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့ကျွမ်းကျင်သူ Event
Millionaire အသေးအဖွဲ: အဘယ်သူ Millionaire လေို?
61.11 ကို MB